NARNIA ၏ရာဇဝင်ချုပ်: SILVER CHAIR သည် FRANCHISE ကိုပြန်လည်စတင်မည်။ NEW CAST, ဒါရိုက်တာအသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သော START ကို - ရုပ်ရှင်များ
Narnia ၏ရာဇဝင်ချုပ်: Silver Chair သည် Franchise ကိုပြန်လည်စတင်မည်။ New Cast, ဒါရိုက်တာအသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သော Start ကို
စီးရီးထုတ်လုပ်သူ Mark Gordon က The Chronicles of Narnia: The Silver Chair သည်အိပ်ငိုက်နေသည့်စိတ်ကူးယဉ်စီးရီးအတွက်အစအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျော်ကြားသောစာရေးဆရာ C.S. Lewis ကရေးသားသောဝတ္ထုခုနစ်ခုအနက်မှ ခြင်္သေ့၊ စုန်းမနှင့်ဗီရို , Prince Caspian နှင့် 2010 ခုနှစ် အရုဏ် Treader ၏ Voyage ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုခုန်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက box office မှာအထွating်အထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဂုဏ်အသရေရှိသောဘဏ္turnာရေးအလှည့်အပြောင်းဖြစ်လင့်ကစားထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်မှုသည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ -action စိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်းကိုဆိုးရွားသောထင်ရှားမှုမရှိခြင်းသို့တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ dystopian juggernauts အားဖြင့် YA ရုပ်ရှင်အာကာသထဲမှထွက်ပေါ်လာသည် The Hunger Games နှင့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖျော်ဖြေရေးရဲ့ ကွဲလွဲသော စီးရီး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Narnia ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ဆယ်စုနှစ်ဝက်မျှသာကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး Collider က Aslan သည်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အော်ဟစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေနိုင်သည်ဟုသတင်းပို့သည်။ Narnia ၏ရာဇဝင်ချုပ်: Silver Chair ။ နောက်ဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်မှာ David Magee ( Pi ၏ဘဝ ရှင်းလင်းစွာသူ၏ကန ဦး ရူပါရုံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသော်လည်း) ဇာတ်ညွှန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးမူကြမ်းအတွက်လှည့်ခဲ့, ရုပ်ရှင်ရဲ့ထုတ်လုပ်သူမာ့ခ်ဂေါ်ဒွန်စတင်ပေါ်ပေါက်လာနောက်ဆက်တွဲမြုံဂိမ်းအပေါ်ခက်ခဲပြန်လည်စတင် hit လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်မကြာမီပြုလုပ်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ သရုပ်ဆောင်ဟောင်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္prကိုပြန်ပြောသည့်အခွင့်အလမ်းများကိုမေးမြန်းသောအခါသူသည်အသစ်စက်စက်ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသူကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးမူရင်း။ မူရင်းဇာတ်ကောင်များ၊ မတူညီသောဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့အသစ်တစ်ခုလုံးမှ၎င်းမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဂေါ်ဒွန်နှင့်မာဂျေးသည်ဘဝကိုငှားရမ်းရန်ငှားရမ်းလိုက်သည် Narnia စီးရီးများနှင့်ရေရှည်ပရိသတ်များသည်ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုရေးဆွဲရန်အဆိုပြုချက်ကိုငြင်းခုံကြသော်လည်းဂေါ်ဒွန်ကပုဂ္ဂိုလ်များသည် C.S. Lewis ၏စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ၏ဇာတိဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Plus အား, ထိုအချက်ကို ငွေရောင်ကုလားထိုင် ရှည်လျားသောအပြီးရာအရပ်ကိုကြာပါသည် အရုဏ် Treader ၏ Voyage , Narnia ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်မီးလျှံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဖန်တီးမှုအဖွဲ့သည်အခွင့်အလမ်းဆုံးပြတင်းပေါက်၌ခုန်ကျော်နေကြသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစတင်မည့်နေ့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအတွက်စကားလုံးမရှိသေးပါ Narnia ၏ရာဇဝင်ချုပ်: Silver Chair ကြွင်းသောအရာမူကား, ဘီးလှုပ်ရှားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီစိတ်ချသော်လည်း - သူတို့သည်ရုံဖြည်းဖြည်းရွားလှရွေ့လျားပါတယ်။
ရင်းမြစ် - Collider
Batman hush Blu ray လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ဘရွတ်ကလင်းကိုးကိုးရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 6
လမ်းလျှောက်သေပြီ rated r ကိုဖြစ်ပါတယ်
The Dark Knight Jay Benedict မြင့်တက်